Bangiyada ugu sareeya Hindiya | Safarka Absolut
Bangiyada ugu sareeya Hindiya
Nidaamka maaliyadeed ee Hindiya wuxuu soo bandhigayaa kala duwanaansho fara badan marka loo eego kan ka jira wadamada reer galbeedka. Dhaqdhaqaaqa maaliyadeed waxaa si aad ah u nidaamiya Gobolka wuxuuna ku wareegayaa hay'adaha maaliyadeed ee dadweynaha. Dhab ahaantii, dhammaan bangiyada Hindiya, oo ay ku jiraan bangiyada gaarka loo leeyahay, waxaa xukuma Bangiga Dhexe ee Hindiya (RBI) Waa waaxda kormeerka ugu weyn ee nidaamka maaliyadeed.
Si kastaba ha ahaatee, Qeybaha bangiyada Hindiya wax badan baa iska beddelay labaatankii sano ee la soo dhaafay. Laga bilaabo 1991, dib u habeyn hami leh ayaa bilaabatay taas oo ay kujirto habab loogu daneynayo xoreynta qeybta iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Tusaale ahaan, waxaa loo oggolaaday in la xorreeyo sicirka dulsaarka, oo hadda ay si xor ah u dejin karaan hay'adaha kala duwan. Natiijada ka soo baxday dib-u-habeyntaani waa panorama cusub oo dhaqaale oo ka jirta waddanka Aasiya. Kuwani waa markaa bangiyada waaweyn ee Hindiya:
Bangiyada ganacsiga ee Hindida waxaa loo qaabeeyey laba kooxood oo waaweyn:
Bangiyada Ganacsi ee aan Jadwalka loo qorsheyn, oo ka kooban bangiyo ganacsi oo aan ka diiwaan gashanayn Jadwalka Labaad ee Sharciga Keydka Bangiga Dhexe ee Hindiya, oo ah sharci laga soo bilaabo xilligii gumeystaha, tan iyo markii la soo saaray 1934, laakiin wali wuu socdaa Qeybtaan waxaa ku yaal bangiyada maxalliga ah. Muhiimadda ay u leedahay nidaamka bangiyada hadda jira ayaa xadidan.
Bangiyada Ganacsiga oo loo qorsheeyay, taasi waa, hay'adaha bangiyada ee ka diiwaan gashan sharciga kor ku xusan. Bangiyadan ayaa markooda loo qaybiyaa laba qaybood oo kale:
Hay'adaha bangiyada gaarka loo leeyahay (mid qaran iyo mid caalami ah)
1 Bangiyada dadweynaha
1.1 Bangiga Dhexe ee India
1.2 Bangiyada la qarameeyay
1.3 Bangiyada gobolka ee meelaha miyiga ah
2 Bangiyada gaarka loo leeyahay
2.1 Bangiga ICICI
2.2 Bangiga Qaranka ee Punjab (PNB)
2.3 Bank Canara
Bangiyada Hindiya ee ku milmay waaxda gaarka loo leeyahay waxay sameystaan ​​koox si hufan u kala geddisan oo loo kala saari karo saddex qaybood oo ballaaran:
Bangiga Dawladda ee Hindiya (SBI) waa bangiga guud ee dalka hoggaamiya
Bangiga Dhexe ee India
Waa bangiga guud ee dadweynaha ee Hindiya oo leh 80% deebaaji ah iyo kan ugu tirada badan xafiisyada iyo laamaha waddanka oo dhan.
Bangiyada la qarameeyay
Bangiyadan waxaa la wareegay gobolka Hindiya maalinteeda si ay uga badbaadiso musalafnimada. Waxay ku dhow yihiin 20 hay'adood. Inta badan qarameynta ayaa dhacday 1969. Laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeyay, bangiyadu waxay bilaabeen inay u shaqeeyaan sidii hay'ado maaliyadeed oo dhaqan bulsheed leh, oo ay waajib ku tahay inay qayb ka mid ah kheyraadkooda u hibeeyaan waaxyaha horumarintooda Gobolku tixgelinayo
Bangiyada gobolka ee meelaha miyiga ah
Bangiyadan waxaa abuuray Gobolka 1975 iyadoo ujeedadu tahay fududeynta helitaanka amaahda beeraleyda yaryar. Waqtigaan la joogo waxaa jira ku dhowaad 50 hay'adood oo nuucaan ah oo loo qaybiyey dalka oo dhan.
Waqtigan xaadirka ah, kudhowaad 20 hay'ado deyn oo gaar loo leeyahay oo leh raasumaal qaran ayaa ka shaqeeya Hindiya. Bangiyada gaarka loo leeyahay ee Hindida waxaa soo rogay sharciyo adag oo dawladeed dabayaaqadii 60s, taas oo hakisay koritaankoodii. Kaliya kadib dib-u-habeyntii 1991-kii ayay awood u yeesheen inay dib u hantaan awoodda ay kula tartami karaan bangiyada dawladda. Kuwa ugu muhiimsan, waxaa mudan in la xuso waxyaabaha soo socda, kuwa ay weheliyaan Bangiga Dawladda ee Hindiya (SBI) oo ah koox loogu yeero "Afar weyn" Bangiyada Hindiya: Bangiga ICICI, Bangiga Qaranka ee Punjab, Bangiga Hindiya y Bangiga Canara.
Laanta Bangiga ICICI
El - ICICI, Hay'adda Deynta Warshadaha iyo Maalgashiga ee Hindiya, waa bangiga labaad ee ugu weyn dalka Hindiya, in ka badan laba kun oo laamood ayaa ku baahsan dalka oo dhan. Sidoo kale waa kan ugu badan ee bixiya kaarka amaahda Hindiya.
Waxaa la aasaasay 1954 waxayna ku saleysan tahay Bombay. ICICI waxay noqotay mid kamid ah bangiyada gaarka loo leeyahay ee Hindida ah kadib guushii ay ku midoobeen Bangiga Rajasthan sanadka 2010.
Waxay hadda ku dhex jirtaa mashruuc balaadhin caalami ah. Bangiga ICICI wuxuu ku yaalaa 17 wadan oo ka baxsan Hindiya: Bangladesh, Bahrain, Belgium, Canada, China, Dubai, United Arab Emirates, United States, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, United Kingdom, Russia, Singapore, Sri Lanka, South Africa iyo Thailand.
Bangiga Qaranka ee Punjab (PNB)
La aasaasay 1894, ka Bangiga Qaranka ee Punjab (PNB) Waa tan saddexaad ee ugu weyn Hindiya. In kasta oo ay hawsheeda ka bilawday magaalada Lahore, haddana xarunteeda hadda ku taal ayaa ku taal New Delhi.
Waxay leedahay hoosaadyo bangi oo ku yaal Boqortooyada Ingiriiska, Hong Kong, Dubai iyo Kabul (Afgaanistaan), marka lagu daro xafiisyada wakiillada ee Almaty (Kazakhstan), Dubai, Oslo (Norway), iyo Shanghai (Shiinaha).
Hoggaamiyihii xorriyadda Hindiya, Mahatma Gandhi, wuxuu had iyo jeer si gaar ah ula shaqeyn jiray bangigan arrimahiisa gaarka ah. Dabeecadda qaran ee GNP sidoo kale waxay ka muuqataa xaqiiqda ah inay tahay mid ka mid ah bangiyada ugu da'da weyn dalka, oo lagu abuuray raasumaal qaran oo dhammaystiran oo wali shaqeynaya.
Bangiga Cnara, bangiga weyn ee Bangalore iyo mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn dalka, waa magaca afraad ee dhammaystira turubka bangiyada waaweyn ee Hindiya.
In kasta oo waqtiga la dhaafay iyo isbeddellada qotada dheer ee lagu soo arkay waaxda sannadihii la soo dhaafay, Bangiga Canara weli aamin buu ku yahay mabaadi'da dhiirrigelisay aasaaskeeda. Ujeeddooyinkaas waxaa ka mid ah, ujeeddooyinka ciribtirka khuraafaadka iyo jahliga, abuuridda caado u ah keydinta iyo maalgelinta qayb ka mid ah faa'iidooyinkeeda mashaariicda bulshada ayaa muuqata.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Bangiyada ugu sareeya Hindiya